दराजमा अब भारत र चीनबाट पनि सामान मगाउन सकिने (भिडिओ) :: Setopati
अनलाइन बजार दराजले हालै 'ग्लोबल कलेक्सन' फिचर सार्वजनिक गरेको छ। योसँगै कम्पनीले बुधबारदेखि 'इन्डिया बजार फेस्ट' पनि घोषणा गरिसक्यो।
ग्लोबल कलेक्सन के हो, कसरी काम हुन्छ लगायत विषयबारे सतोपाटीले कम्पनीका चिफ कमर्सियल अफिसर टेम्पल प्याकुरेलसँग कुरा गरेको छ।
पढ्नुस् प्याकुरेलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
दराजमा अहिले ग्लोबल कलेक्सन भनेर देखिएको छ। यो के हो?
ग्लोबल कलेक्सन भन्नाले बाहिरी मुलुकमा पाइने सामग्रीहरूको संकलन हो। यो दराजको नयाँ सुविधा हो। यसमार्फत ग्राहकले बाहिरी मुलुकमा पाइने सामग्री घरमै बसेर मगाउन सक्छन्। अहिले हामी चीन र भारतमा पाइने सामग्री उपलब्ध गराएका छौं। ग्राहकले सामग्रीको अर्डर दिएपछि नै सामग्री आयात गर्छौं।
कस्ता सामग्रीहरू ग्राहकले मगाउन सक्छन्? यो सुरू गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो?
नेपाली बजारमा नपाइने सामग्रीहरू ग्राहकले मगाउन सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो कपडा होस् या कुनै घरायसी, फर्निचर, इलेक्ट्रिक वा स्टेसनरी सामग्री।
अनि ग्लोबल कलेक्सन सुरू गर्नुको पहिलो उद्देश्य विदेशमा पाइने तर नेपालमा नपाइने सामग्री नेपाली ग्राहकसम्म पुर्‍याउनु हो।
दोस्रो भनेको नेपालका विक्रेताहरूबीच सकारात्मक शैलीले बजार-व्यवसाय सम्बन्धी प्रतिस्पर्धाको लागि बढावा दिनु हो।
दराजले यहाँको स्थानीय ब्रान्ड र विक्रेताहरूलाई बढावा दिएको देख्छौं। जस्तै यसले सारथी र सहयात्रीजस्ता इनिसिएटिभ्सलाई सक्रिय रूपमा प्रमोट गर्दैछ। यस्तो स्थानीय ब्रान्डलाई ग्लोबल ब्रान्ड र बिक्रेताका रूपमा किन विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ?
नेपालको स्थानीय ब्रान्ड र बिक्रेताहरू दराजको मुख्य अंग हुन्। हामीसँग स्थानीय बिक्रेताहरू तुलनात्मक रूपमा बढी हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बिक्रेता र ब्रान्ड सिमित छन्।
नेपाली व्यवसायहरू इ-कमर्समा भर्खंरै प्रवेश गर्दैछन्।त्यस्ता इ-व्यवसायीले भविष्यमा राम्रो बजार पाऊन् भनेर विभिन्न अभियानहरूमार्फत दराजले उनीहरूलाई विस्तार गर्दैछ।
ग्लोबल कलेक्सन सार्वजनिक गर्नु भएसँगै इन्डिया बजार फेस्टबारे घोषणा गर्नुभयो। यो भनेको के हो र यसबाट ग्राहकले के अपेक्षा राख्न सक्छन्?
बुधबारबाट सुरू भएको इन्डिया बजार फेस्टमा ग्राहकले भारतबाट विभिन्न सामग्री मगाउन सक्छन्। पहिलेको ग्लोबल कलेक्सनमा बढी चीनका सामग्री राख्यौं। इन्डिया बजार फेस्टमा भने हामी भारतका सामग्रीमा केन्द्रित छौं। भारतीय बजारमा पाइने कपडा, फर्निचर, घरायसी वा अन्य सामग्रीमा नयाँपन र पृथकता पाउन सकिन्छ। जुन नेपाली ग्राहकको स्वादअनुसार उपयुक्त छ। तिनै कुरालाई पनि दराजले बढावा दिँदै इन्डिया बजार फेस्ट सुरू गरेको हो।
इ-कमर्स कम्पनीहरू भन्नेबित्तिकै डेलिभरीको कुरा आउँछ। अहिले स्थानीय सामग्रीहरू समयमै डेलिभरी गर्नु नै चुनौतीपूर्ण छ। अझ दराजमार्फत ग्राहकले बाहिरी मुलुकबाट पनि किनमेल गर्न पाउने भएका छन्। यसको समयमै डेलिभरी गर्न के-कस्तो तयारी हुँदैछ?
नेपालमा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई डेलिभरी चुनौतीपूर्ण बनेको कुरा मान्छु। अझ बाहिरी मुलुकबाट सामग्री मगाउँदै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा २० देखि २५ दिनको समय भन्छौं। यो भनेको निकै लामो समय हो। त्यसैले कसरी डेलिभरी छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलसँगै काम पनि हुँदैछ। भविष्यमा हामी दस दिनभित्र शिपिङका सामग्री डेलिभर गर्न सक्ने हुने भन्ने छ।
दराजको ग्लोबल कलेक्सनमार्फत ग्राहकलाई कसरी फाइदा हुन्छ? यसका लक्षित ग्राहक को हुन्?
ग्लोबल कलेक्सनमार्फत हामीले ग्राहकसम्म नेपालमा नपाइने नयाँ सामग्री पुर्‍याऊँ भन्ने नै हो। यसले ग्राहकले भनेजस्तो सामग्री पनि पाउनु हुने भयो। त्यस्तै यो पहलले अहिले भएका व्यवसायी र बिक्रेताबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिनेछ।
नयाँ ग्लोबल कलेक्सन र इन्डिया बजार फेस्टको लक्षित ग्राहक अहिले भइरहेकै ग्राहक हुन्। त्यो भनेको हाम्रो ग्राहक बढी १८ वर्षदेखि ३५ उमेरका छन्। अहिले इन्डिया बजार फेस्टकै लागि हामीसँग १० देखि १२ हजार सामग्री छन्।
दराजले यस विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ?
हालसम्म हामीले मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं। यसलाई रचनात्मक रूपमा लिन्छौं। दराजमा पाइने सामग्रीको रेटिङ हेरेर पनि समग्र प्रतिक्रिया बुझ्न सकिन्छ। अझ विशेष ग्लोबल कलेक्सनका सामग्रीमा हाम्रा ग्राहकहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। थप सामग्री ल्याउन पर्‍यो भन्नुहुन्छ। थोरै त्यस्ता ग्राहक हुनुहुन्छ जसलाई केही कुरा चित्त बुझेको छैन। हामी उहाँहरूका माग र प्रतिक्रियालाई पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्दैछौं।
त्यस्तै ग्लोबल कलेक्सनका सामग्रीबारे प्रायः मूल्य महँगो भएको विषय उठ्छ। अहिले उपलब्ध मूल्यभन्दा सस्तोमा सामग्री उपलब्ध गराउने कोसिसमै छौं।
अघि भनेजस्तै इ-कमर्स निकै चुनौतीपूर्ण छ। यस्तोमा नेपाली बिक्रेता र ग्राहकसँग काम गर्दा हुने अप्ठ्यारा के-कस्ता हुन्छन्? अब झन् बाहिरी मुलुकका बिक्रेतासँग पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। तयारी कस्तो छ?
हाम्रो स्थानीय बिक्रेताको कुरा गर्दा धेरैलाई अनलाइन व्यवसायको अवधारणा बुझाउन समय लाग्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनलाइन व्यवसायबारे प्रायः अवगत छन्। त्यसैले उनीहरूसँग काम गर्न सहज हुन्छ। यतिबेला हामी ग्लोबल कलेक्सनका सामग्रीको बिक्रेतासँगै स्थानीय बिक्रेताहरूसँग समेत अनलाइन व्यवसायको अवधारणा स्पस्ट पार्न काम गरिरहेका छौं।
दराजमा ग्राहकले बाहिरी मुलुकबाट कस्टमाइज सामग्री मगाउन मिल्छ?
हाल ग्लोबल कलेक्सनमा कस्टमाइज सामग्री उपलब्ध गराएका छैनौं। किनभने यसमा सामग्री फिर्ता हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यसै पनि ग्लोबल कलेक्सनका सामग्री फिर्ता गराउन व्यवहारिक छैन। यो सम्भव बनाउन कसरी सकिन्छ भन्नेबारे पनि हामी काम गर्दैछौं।
तपाईंले भन्नुभएझैं अब ग्राहकले चीन र भारतबाट सामान मगाउन सक्ने भए। भविष्यमा यीबाहेक अन्य राष्ट्रबाट सामग्री मगाउन कत्तिको सम्भव होला? के-कस्तो योजनामा काम गर्दै हुनुहुन्छ?
चीन र भारतबाहेक अन्य राष्ट्रबाट पनि सामग्री मगाउन सक्ने सम्भावना छ। यसबारे काम पनि हुँदैछ। तर अहिले चीन र भारतबाटै थुप्रै सामग्री मगाउन सकिन्छ र हामी यसैमा बढी केन्द्रित छौं।
दराजले अहिले देशका कति ठाउँमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ?
अहिले दराजले नेपालभर झन्डै ५० वटा सहरमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ।
(दराजका चिफ कमर्सियल अफिसर टेम्पल प्याकुरेलसँग सेतोपाटीका जुना श्रेष्ठ र सुसन चौधरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १, २०७८, १५:२१:००